Tsy nahazo vatsim-pianarana efa-bolana: mihetsika indray ny mpianatry ny Degs Ankatso | NewsMada
Tsy nahazo vatsim-pianarana efa-bolana: mihetsika indray ny mpianatry ny Degs Ankatso
Nanao hetsika fanairana ny tomponandraikitra ny mpianatry ny oniversiten’Antananarivo ao amin’ny fakiolten’ny fianarana lalàna, toekarena sy fitantanana ary sosiolojia (Degs), omaly teny an-toerana. Antony ny tsy mbola namoahan’ny mpitantana ny tetiandro hizarana ny vatsim-pianarana efa-bolana (avrily, mey, jona ary jolay) raha efa nisitraka izany avokoa ny fakiolte sy ny sekoly ambony hafa ao anatin’ny oniversiten’Antananarivo, araka ny fanazavan’ny solontenan’ny “association pédagogique” ao amin’ny Degs, omaly.
Taorian’ny fivorian’ny mpianatra tonga, tapaka fa hanome 24 ora ny tomponandraikitra ny mpianatra hamoahana ny tetiandro. « Rehefa tapitra ny fe-potoana, hiditra amin’ny hetsika mafimafy izahay ka hitondra kiririoka sy sarom-bilany eny amin’ny Esplanade Ankatso anio », hoy ny nambarany.
Efa hifarana ny taom-pianarana 2017-2018 satria hiditra amin’ny fanadinana dingana faharoa sady farany ny mpianatra, ny faran’ny volana izao, nefa vatsim-pianarana iray volana monja no azo hatramin’izao. Miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny mpianatra ny tohin’ny hetsika na hivoaka ny faritry ny onivesite na tsia.
Manomboka anio koa ny fampirantiana ny lalam-piofanana (amin’ny fakiolte sy sekoly ambony) misy eny amin’ny oniversiten’Antananarivo ho an’ny mpianatra vao nahazo mari-pahaizana bakalorea farany teo. Nanamarika ny mpianatra fa sady mandeha ny fitakiana no manomana ny fampirantiana izy ireo satria samy zava-dehibe avokoa ireo hetsika ireo. 80 ny tranoheva handray ny mpianatra eny Ankatso hanome ny tsara ho fantatra amin’ny lalam-piofanana rehetra azo isafidianana.
Hivoaka anio ny tetiandro
Nanambara ny filohan’ny oniversiten’Antananarivo, omaly, fa efa vonona ao ny vola vatsim-pinarana efa-bolana ho an’ny mpianatra. Miankina amin’ny departemanta tsirairay ny fandaminana amin’ny famoahana ny tetiandro sy ny lisitra. Tsy ho ela intsony, araka izany, ny fizarana ny vola vatsim-pianarana satria havoaka anio ny tetiandro nandrasan’ny mpianatra. Nanamafy ny mpianatra fa nivoaka omaly hariva ihany ny tetiandro.